pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း)
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အဆုတ်ပျက်စီးပြီး အမာရွတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ အဆုတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်တစ်ရှုးတွေ ထူထဲသွားတာကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲသွားပြီး ပိုဆိုးလာတဲ့အခါမှာ အသက်ရှုရခက်ခဲလာပါတယ်။
အဆုတ်အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းဟာ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြေအနေတော်တော်များများမှာတော့ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်တွေ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ ရောဂါရင်းမြစ်ကို မရှာဖွေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရင်းမသိရှိရသော အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်သော အဆုတ်ပျက်စီးခြင်းဟာ ပြန်လည်မပြုပြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးဝါးတွေ၊ကုထုံးတွေနဲ့ကတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပြီး နေရထိုင်ရအဆင်ပြေလာစေပါလိမ့်မယ်။ အချို့လူတွေမှာတော့ အဆုတ်အစားထိုးခြင်းက သင့်တော်နိုင်ပါတယ်။
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ သူ့အလိုလို ကိုယ်အလေးချိန်ကျနေခြင်း
လက်ထိပ်၊ခြေထိပ်တွေ ဖောင်းလာခြင်း (Clubbing)
အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်းရဲ့ ဖြစ်ပေါ်ပုံတွေ၊ ရောဂါလက္ခဏာဆိုးရွာမှုတွေဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွဲပြားကြပါတယ်။ အချို့လူတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖျားနာကြပါတယ်။ အချို့ကျတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပိုးဆိုးလာတတ်ပြီး နှစ်တွေလတွေထိ ကြာမြင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
အချို့လက္ခဏာတွေ ဥပမာအားဖြင့် အသက်ရှုကြပ်ခြင်းလိုမျိုး တွေဟာ လျင်လျင်မြန်မြန်ပိုဆိုးလာတတ်ပြီး ရက်တွေ ရက်သတ္တပတ်တွေ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် အသက်ရှုစက်တပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ပဋိဇီဝဆေးတွေ၊ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်တွေနဲ့ အခြားဆေးတွေပါ ပေးပါလိမ့်မယ်။
အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိချင်တာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေရှိမယ် ဒါမှမဟုတ် မေးချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်ပုံချင်း မတူညီကြပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဆုတ်အသားမာတက်နိုင်ခြေများစေသော အရာတွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆီလီကာ၊ သံမှုန်သံမွှား၊ ဘက်တီးရီးယား၊ တိရိစ္ဆာန်ပရိုတင်းများ၊ ဓါတ်ငွေ့များနဲ့ ရေမွှေးများကဲသို့သောအရာများဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းခြင်း
မျိုးရိုးဗီဇ။ မိသားစုအချို့မှာဆိုရင် အဆုတ်အမာရွတ်ဖြစ်တဲ့ လူနာဟာ အနည်းဆုံး၂ယောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
Gastroesophageal reflux disease (GERD)။ အစာအိမ်ထဲရှိအက်စစ်များ လည်ပင်းထိ ပြန်ကန်တက်သော ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူတွေမှာ ထိုအက်စစ်အနည်းငယ်ကို ပြန်ရှုမိပြီး အဆုတ်တွေ ပျက်စီးတတ်ကြပါတယ်။
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါတို့က အဆုတ်အသားမာတက်နိုင်ခြေကို မြင့်မားစေပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ အဆုတ်အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းကို ကလေးတွေမှာ တွေ့ရှိရသော်လည်း တကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်ခြေများတာက သက်လတ်ပိုင်းနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျား၊မ။ မိန်းမတွေထက် ယောက်ျားတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူကော၊ ဆေးလိပ်သောက်ဖူးထားတဲ့သူတွေမှာပါ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ အဆုတ်တစ်ရှုးလေဝင်တဲ့သူတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့အလုပ်အကိုင်များ။ မိုင်းတွင်းတူးလုပ်ငန်း၊ လယ်လုပ်ငန်းနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် အဆုတ်အတွက် မကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့နေသူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာကုထုံးများ။ ရင်ဘတ်ကို ဓါတ်ကင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အချို့ကင်ဆာဆေးဝါးတွေက အဆုတ်အမာရွတ်ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားစေပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ။ အချို့ အဆုတ်အမာရွတ်တွေဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေမှာ မျိုးရိုးဗီဇက အရေးကြီးအချက်တစ်ခုပါပဲ။
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အဆုတ်အသားမာတက်စေတဲ့ ရောဂါများစွာရှိပါတယ်။ လူနာကို အထူးကုနဲ့ပြခိုင်းပြီး မှန်ကန်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးလိပ်သောက်လား၊ အလုပ်မှာ အဆုတ်ကို အန္တရယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေ ရှုမိနေလား၊ ဘာဆေးတွေသောက်ထားလဲ၊ အခြားဘာရောဂါတွေရှိလဲ၊ မိသားစုထဲမှာ ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်ဖူးလဲနဲ့ ဝါသနာက ဘာတွေလဲဆိုတာကို မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။
အခြားသော စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်ဘယ်လောက်ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာ သိရှိဖို့ အသက်ရှုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်း
သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏ၊ ကိုယ်တွင်းပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်ရဲ့ပဋိဓါတ်တွေက ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သောရောဂါနဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းတွေ ရှိမရှိသိဖို့ သွေးစစ်ပါလိမ့်မယ်။
HRCT ဖြင့်မရပါက အဆုတ်အသားစယူခြင်း။ အသားစအနည်းငယ်ကို ခွဲစိတ်ထုတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်၏ အောက်စီဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်စိုက်တို့ လဲလှယ်နိုင်စွမ်းအား ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
pulmonary fibrosis (အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ထိုရောဂါအတွက် ကုသမှုမရှိသေးသလို၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ရပ်တန့်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးလည်းမရှိပါဘူး။ အချို့ကုသမှုတွေကတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ခဏတာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးလာမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ အခြားနည်းလမ်းတွေကတော့ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက သင့်တော်တဲ့ကုသမှုရွေးချယ်ခြင်းကို လူနာအခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးတယ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ်ဆေးဝါးများ ဖြစ်သော Pirfenidone(Esbriet) နဲ့ Nintedanib(Ofev) တို့ကို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထိုဆေးဝါးတွေဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာမှုကို နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံးက အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ(FDA) က အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဝါးအသစ်တွေ၊ ဖော်မျူလာအသစ်တွေလည်း ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း FDA အသိအမှတ်မပြုသေးပါဘူး။
Nintedanid က မအီမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းလျောခြင်းလိုမျိုး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Pirfenidone ကတော့ ထိုဆိုးကျိုးတွေအပြင် အင်ပျဉ်တွေပါ ထွက်စေမှာပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြပြီးသား GERD ကို ကုသဖို့အတွက်ကတော့ အက်စစ်ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးတွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အောက်စီဂျင်အသုံးပြုခြင်းက အဆုတ်ပျက်စီးခြင်းကို မတားဆီးနိုင်သော်လည်း အသက်ရှုရ၊ လှုပ်ရှားသွားလာရ လွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။
သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်နည်းပါးခြင်းအား ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးညာဘက်ခြမ်းရှိ သွေးပေါင်ချိန်အား လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အိပ်စက်မှုအတွက် အကျိုးပြုပြီး နေရထိုင်ရသက်သောင့်သက်သာရှိစေပါတယ်။
အချို့လူတွေက အောက်စီဂျင်ကို အချိန်တိုင်း အသုံးပြုကြသော်လည်း အိပ်တဲ့အချိန်နဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာသာဆိုလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ထိုနည်းလမ်းက ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာစေနိုင်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အောက်ပါတို့အပေါ်မှာ အဓိကအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။
အဆုတ်အစားထိုးခြင်းကလည်း ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက နေရထိုင်ရအဆင်ပြေသွားစေပြိး သက်တမ်းပိုရှည်စေနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခန္ဓါကိုယ်က အစားထိုးသော အဆုတ်အား ပြင်းပယ်ခြင်းနဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းလိုမျိုး ထပ်တိုးရောဂါတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းအရာတွေအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးရပါမယ်။
အဆုတ်အသားမာတက်ဖြစ်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေကဘာတွေလဲ။
အဆုတ်အသားမာတက်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်ရောဂါရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှုမိရင်လည်း အန္တရယ်ရှိတာကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေ အနားမှာ မနေပါနဲ့။
ကျန်းမာစွာစားသောက်ပါ။ အဆုတ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေဟာ စားရသောက်ရအဆင်မပြေတာကြောင့်ကော အသက်ရှုရခက်လို့ အားပိုထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကယ်လိုရီအသင့်တင့်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ စားဖို့လိုပါတယ်။ နေ့ဘက်တွေမှာ နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏစားသောက်ပေးပါ။
သစ်သီးသစ်ရွက်တွေ၊ နှံစားသီးနှံတွေ၊ အဆီမပါသော ဒါမှမဟုတ် အဆီနည်းသော နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အဆီမပါသောအသားတွေ စားပေးပါ။ ပြန်ကျော်ဆီတွေ၊ ပြည့်ဝဆီတွေပါသော၊ ဆားများသော၊ သကြားများသော အစားအစာတွေ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အာဟာရပညာရှင်တွေထံမှာ အကြံအဉာဏ်တွေ တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်ပါ။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းက အဆုတ်စွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြိး စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးစီးခြင်းတို့လိုမျိုး အားကစားတွေကို နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးပါ။ ဘယ်အားကစားတွေက ကိုယ်နဲ့သင့်တော်လဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဖြင့် တိုင်ပင်ပေးပါ။ ဝှီးချဲနဲ့နေရပြီဆိုရင်တော့ လမ်းလျောက်ဖို့မလိုသော ကိုယ်ဝါသနာပါမယ့် အားကစားတွေ ရွေးချယ်ပေးပါ။
အနားယူဖို့အချိန်ပေးပါ။ လုံလောက်သော အနားယူမှုရှိနေပါစေ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းက အားအင်ပြည့်ဝနေစေပြီး ဖိအားတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေပါလိမ့်မယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းက လူနာ့ရောဂါအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးနဲ့ နှစ်စဉ်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတို့ ထိုးပေးပါ။ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါ။ တုပ်ကွေးရာသီမှာ လူစုလူဝေးထဲသွားလာခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို သေချာလိုက်နာပါ။ ကုသမှုတွေ ဆက်လက်ခံယူနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာပါ၊ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ဆေးသောက်ပါ၊ လိုအပ်သလို အစားအသောက်ချိန်စားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းတိုင်း မှန်မှန်သွားပါ။
မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-fibrosis/home/ovc-20211752. Accessed July 19, 2017.
http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-fibrosis/. Accessed July 19, 2017.